एजेन्सी, एक अध्ययनका अनुसार हरेक युवती/महिलाले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठा अनौठा यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँछन् । केटीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोंच्छन् ? अपरिचितसँग सेक्स अधिकांस महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर कतिपय समयमा अपरिचित […]
एजेन्सी, एउटा अन्तराष्टिय अध्ययन अनुसार प्राय महिलाहरु गाजा खाएर यौन सम्पर्क गर्ने पाइएको छ । यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न र यौन इच्छाबढ्ने गरेको कारण गाँजा पिउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, यौन सम्पर्कगर्दा बढी तरलता हुने र पिडा नहुने गरेको त्यसमा संलग्न महिलाहरुले बताएका छन् । यौन सम्पर्क गर्नु अघि गाँजा पिउने महिलाहरुले गाँजा […]
एजेन्सी, चरम आनन्दका लागि फोरप्लेको अहम् भूमिका रहन्छ । उनीहरुसँग यौनसम्बन्धी कुराकानी गर्ने, रोमाञ्चक वातावरणको सृजना गर्ने, शरीरका विभिन्न भागलाई सुम्सुम्याउने अथवा चुम्बन गर्ने आदि क्रियाकलापले महिलालाई उत्तेजित बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी, फोरप्लेले महिलालाई उत्तेजित गर्दछ जसका कारण योनिमा तरल पदार्थ आउनुका साथै योनि खुल्न पनि सहयोग गर्दछ । चरम आनन्दका लागि क्लिटरिस प्ले अर्थात् […]
एजेन्सी, महिलामा हुने केही यौन रोगहरु महिलाहरुमा क्लमिडिया रोग क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणुबाट हुन्छ । यसका लक्षणहरु पिसाव फेर्दा पीडा हुनु,तल्लो पेट दुख्नु, भेजिना डिस्चार्ज, यौन सम्पर्कको बेला हुने पीडा, महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्नु,गोनोरिया (धातु रोग) आदि रहेका छन् । स्केबीज रोग यौन सम्बन्ध, एक-अर्काको सम्पर्कका कारण अथवा यो रोगको संक्रमित व्यक्तिको लुगा अथवा […]
महिलाहरु यौनसम्पर्कपछि यसरी हिड्छन्, थाहा पाउनुहोस्
एजेन्सी, एक अन्तराष्टिय अनुसन्धान अनुसार शाररिक सम्पर्क गर्दा पूर्णरुपमा यौन आनन्द लिने र नलिना सक्ने महिलाको हिडाई नै फरक हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार शारीरिक सम्भोगको समयमा आनन्द लिने महिलाहरु र सम्भोग सुख महिलाहरुमा भन्दा हिँड्ने बेलामा ढाड तथा नितम्बको लचकता धेरै हुने र उनीहरुले अलि लामा लामा पाइला चाल्ने गर्छन् । […]
एजेन्सी, पुरुषहरुको लिंग प्राय बाङ्गो, टेडो, पातलो, मोटो आदि विभन्न प्रकारको हुन सक्छ । अनुसन्धान कर्ताका अनुसार लिंगको आकारले यौन आनन्दमा त्यति प्रभाब पार्दैन । तथापि धेरै सेलिब्रेटीहरु भन्ने गर्छन,यौन आनन्द प्राप्त गर्नका निम्ती आफुलाई चाहिने लिंगको आकार यत्रो हुनु पर्छ भन्ने कुरा । अनुमानको भरमा पनि कतिपय अवस्थामा लिंगको साइज पत्ता लगाउन सकिन्छ । […]
एजेन्सी, मानिसको जीबनमा हरेक खालका समस्याहरु आउछन् त्यो मध्ये एक टाउको दुखाइ हो । टाउको दुखाइ पनि विभिन्न कारणले दुख्ने हुन्छ कहिले कहिँ बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, चक्कर लाग्ने, आधा टाउको दुख्ने,वाक वाक लाग्ने, वान्ता हुने, घाम वा भीडभाडमा जाँदा टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने जस्तो लक्षण माइग्रेनका हुन सक्छन् । अति दुर्गन्ध तथा बास्ना […]
धर्म शास्त्र अनुसार महिलाहरुको ब्यबहारबाट पनि थाहा नपाएको कुरा महिलाको नाभीले बताउ छ । त्यस्तै महिलाको नाइटोले कसरि बताउ छ त महिलाहरुको स्वभाव धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ । धर्मशास्त्रमा बताइए अनुसार महिलाहरुको नाइटो लामो र अनियमित हुनेहरुको आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन । स्वभिमानी र आत्मबिश्व्स बढी हुन्छ । यी महिलाहरु धेरैसंग परिचय र चिनजान हुने […]
महिलाहरुमा विभिन्न खालका समस्याहरु आउछन् त्यो मध्ये एक योनीवाट सेतो पानी हो । महिलाहरुमा यस्तो समस्याहरु हुन सक्छ । यस्तो हुनुका कारण र उपचारहरु यस्तो छ । कारणहरु रोगग्रस्त पुरुषसंग यौन सम्पर्क गर्नाले यौनसम्पर्क पछि योनीको सफा पानीले सफा नगर्नाले बारम्बार गर्भपतन गराउनाले अत्यधिक यौन सम्पर्क, मुख मैथुन, सम्भोगको अप्राकृतिक प्रयोगले उपचार र रोकथाम यो […]
महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील अंगहरु
महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भागहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । अधिकाँश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिकरुपमा निक्कै संवेदनशील मानिन्छन् । पिठ्युँ पेट कपाल कम्मर मुस्कान ओंठ बक्षस्थल पुट्ठो आँखा
एजेन्सी, विवाहित महिलातर्फ युवा आकर्षित हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । हालै भएको एक अनुसन्धानका अनुसार यो तथ्यलाई पनि पुष्टि गरेको छ । शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ? यस्ता छन् कारणहरु विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको मुख्य कारण शारीरिक […]
लामो समयसम्म शारीरिक सम्पर्क नगर्दा शरीरमा आउँछ यस्तो परिवर्तनहरु
एजेन्सी मानिसको जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरु आउछन् । कतिपय शारीरिक हुन्छ भने कति मानसिक पनि हुन्छ । विशेषगरी विवाहित व्यक्तिहरुमा पनि कुनै यस्तो समस्या हुन्छ । जुन कुनै समयमा आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर शारीरिक सम्पर्क गर्न सक्दैनौं । यो विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शारिरीक सम्पर्क गर्न सक्षम […]
मूत्रनलीको संक्रमण हुनुका कारणहरु
एजेन्सी, पिसाबको संक्रमण हरेक मानिसले भोगेको समस्या हो । पिसाब गर्दा दुख्ने, पोल्ने हुँदा अत्यन्तै पीडा हुने यो संक्रमण महिला र पुरुष दुवैलाई हुन्छ । यौनाङ्गको विशेष हेरचाह र सरसफाईमा ध्यान नदिँदा धेरैजसो यो समस्या हुने गर्छ । मासिक श्राव, गर्भावस्था, असुरक्षित यौनसम्पर्क आदिका कारण यो समस्या देखा पर्ने गर्छ । कारण ब्लाडर सुन्निनु मृगौलाको […]
एजेन्सी, स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता–कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छ निर्वस्त्र हुने चाहना महिलाहरु पुरुषको अगाडी […]
शीघ्र स्खलन कम गर्ने ७ तरिकाहरु
एजेन्सी, शीघ्र स्खलन हुनुको कारण प्रायः जसो शारीरिक भन्दा पनि बढी मानसिक समस्या नै रहेको पाइन्छ । शीघ्र स्खलनको समस्यालाई कम गर्न तरिकाहरु हस्तमैथुन गर्ने र वीर्य स्खलन होला जस्तो भएपछि रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः हस्तमैथुन सुरु गर्ने र वीर्य स्खलन होलाजस्तो रोक्ने र यो प्रक्रिया दोहार्याेउने । आफ्नो यौन जोडीलाई खुशी […]
सेक्स पावर बढाउनको लागि यो फलको जुस उपयुक्त